Misy kosa ireo karazana sakafo, izay rehefa tsara tahiry, dia tsy manana io olana io, ohatra ny la farine, ny blé, ny vary, sira, siramamy, vanille, café, jirofo, poivre, thé, katsaka, tsaramaso sy voamaina, ny oignon, tongolo gasy, mangahazo maina, trondro maina...
Mety hisy bibikely aza izy ireny indraindray, indrindra fa raha mbola ao anaty gony, tsy miteraka aretina ireny karazana bibikely mihinana ny la farine, na vary na katsaka, na blé ireny, nefa kosa tokony sivanina, mba tsy hinanana ilay biby kely.
Izay no tsara hatrany anasana ny vary na katsaka alohan'ny hinanana azy, satria asiana fanafody famonoana biby ho fiarovana izy ireny ao anaty gony ao.
Any Etats-Unis, na Frantsa, raha izay no atao ohatra, dia misy ireny mpivarotra efa natokana hivarotra ireny sakafo lazaina fa lany daty ireny, toy ny fivarotana déstockage NOZ any Frantsa ohatra, ahitana, yaourt, jus de fruit, conserve maro isan-karazany, la farine, sira, vary, menaka. Nefa Europe anisan'ny sarotiny raha resaka fenitra amin'ny fahasalamam-bahoaka, fa misy fepetra arahina kosa anarahana maso an'izay.
Eo izany no mila jerena ny tena asan'ny laboratoire, satria ry zareo no mamaritra ny fotoana mety ahasimba ilay sakafo na tsia, fa tsy hoe hijery ny daty misoratra amin'ny sachet, na boite, na gony fotsiny.
Ireo sakafo lany daty ve mbola azo omena ny biby?
Ny biby dia mitovy amin'ny olombelona ihany ny zavatra ho aniny, nefa kosa izy mahazaka mihinana zavatra mafimafy noho isika olombelona, arakarak'ilay biby.
Ohatra, ny la farine, na vary, na blé dia azo omena ny biby raha mbola tsy lo. Azo potehina atao provandy omena ny trondro ompiana ihany koa.
Izay tena efa simba kosa, dia mbola azo anaovana biogaz, na zezika.
Isika izany zatra sy tia mandoro sy manimba zavatra, nefa dia mbola azo ampiasaina avokoa izy ireny, firenena aty Afrika anisan'ny betsaka mahatra sy tsy ampy sakafo isika, nefa ny sakafo tokony mbola azo ho hanina, raha tsara tahiry, na vita ny manadio azy, dia dorantsika na alevina, nefa iny fahalovana alevina iny aza mandoto ny rano ao ambanin'ny tany indray.
Ireny finday tsy nisy IMEI ireny izao, na tsy resaka sakafo aza, dia afaka nanaovana pièce détachée, na niantsoana teknisianina anisy IMEI azy.
Toy izany koa ireny la farine, menaka, vary marobe nodorana ireny, misy ny mbola azo nisivanina raha nisy biby kely, misy kosa no mbola azo nanaovana provandy ho an'ny biby, na nanaovana zezika na biogaz.
Misy fenitra takiana kosa amin'ireo mpanafatra entana, sy mpampongady, ny ahatsara hatrany ny toerana hisy ny entana, ny conteneur hiondranan'ny entana, satria iray volana an-dranomasina mety misy amandoana, na misy hevoka anaty gony, ka mitarika fahalovana, mila miala ireny.
Ny tompon'andraikitry ny ministeran'ny varotra moa no manara-maso azy ireny, ka ezahina hiara-hiasa amin'ny laboratoire tena manao ny asany, mba tsy ho fantiantoka ho an'ny mpivarotra, na ho lasa fanararaotana amin'ny resaka kolikoly, nefa koa hiarovana ny mpanjifa sy ny fahasalamam-bahoaka.